Superdry (SDRY) oovimba
Udidi: I-Superdry (SDRY)
I-Superdry yiDlalo yoBuyiselo oluPhezulu oluqhutywa ngaBathengi beGreen
Umthengisi wempahla wase-UK Superdry (SDRY) akazange abe nobhubhani olungileyo. Izabelo zifike kwixesha elisondeleyo le-228p kwi-22 Oktobha, kungekhona kude nonyaka ukuya kutsho kwi-lows ye-196p. Ngexesha lokubhala isitokethi sixabisa kwi-311p.
Kodwa izabelo ziye zabuyela umva ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile kwaye kusenokubakho okuninzi okuzayo njengoko uphawu lwefashoni luhamba ukuze lukhulise iziqinisekiso zalo zozinzo, eziphakathi kwezona zibalaseleyo kushishino.
Ifashoni ezinzileyo = inzuzo enkulu
Ingqiqo yokukhula kwe impahla yeyokuba abalawuli baya kuba nakho ukuphumeza ingqiqo yendalo esingqongileyo ngendlela yokuba ikhulise kakhulu isiseko sabathengi befemu, njengoko abathengi beguqukela ngokwanda kwamanani kubathengisi abagxile ekudambiseni utshintsho lwemozulu kunye nokuzinza.
Kwelo nqaku, inkampani iphumelele amabhaso amabini aphezulu kulo nyaka kuphela. Superdry ibekwe phezulu kwipakethi kwi
Uluhlu lweFinancial Times lweeNkokeli zeMozulu zaseYurophu ngo-2021.
Kulo nyaka ikwaphumelele iDrapers '
IiMbasa zeFashoni eziZinzileyo zowama-2021 'iMbasa yoTshintsho oluNgcono'.
Ukugxekwa okujoliswe kwizinto ezithandwa nguBoohoo, kunye nabahlambululi befashoni ngokukhawuleza ngokubanzi, akugxininisi nje kwimivuzo ephantsi kunye neemeko zokusebenza ezimbi, kodwa kunye nenkqubo yokuvelisa, enzima kakhulu emanzini, singasathethi imikhwa yokulahla. fast-fashion uye wakhuthaza.
I-Superdry inebali elihle elinokubalisa ngendlela elizikhupha ngayo imigodi yesimilo, ngoko ke ibekwe kakuhle ukuba igqame kwisihlwele kwindawo yentengiso enokhuphiswano kakhulu. Kwakhona, ukukwazi ukukhuphisana ngokufanelekileyo ngokungagawuli imida ukuya ethanjeni kuya kwamkelwa ngabaninizabelo.
Iziqhamo zokuqala ze-push entsha evela kwi-Superdry zibonakaliswe ngokumangalisayo kunyaka-mali wokuqala we-2021 iziphumo zexesha eliphela nge-24 ka-Epreli, ingxelo nge-16 kaSeptemba.
Ixabiso lesitokhwe seSuperdry nge-2 kaNovemba ka-2021
Nangona iziphumo zayo ziqhubeka nokuchatshazelwa kakhulu kukuphazamiseka kweCovid kwaye ilindele ukuba iindleko zokuthumela iikhonteyina ezivela e-Asiya zinyuke ngakumbi, iye yanciphisa ilahleko nge-69% ukuya kwi-12 yezigidi zeedola, nangona ingeniso yehla ukusuka kwi-704 yezigidi ukuya kwi-556 yezigidi zeedola 21%.
Nangona kunjalo, iSuperdry ilindele ukunciphisa uluhlu lwempahla ngezigidi ezibini zeeyunithi kwaye ingeniso idlule kumanqanaba embali aphakamileyo kwixesha eliphakathi.
Kulindeleke ukubuyiswa kwengeniso epheleleyo kunyaka-mali wama-2022.
Ngaphaya koko, ukukhula kwe-EPS kulindeleke ukuba kufike malunga ne-203% ngo-2023 njengoko isicwangciso sozinzo senkampani silala.
I-CEO Dunkerton: "Silola ingqalelo yethu yeqhinga"
Igosa elilawulayo uJulian Dunkerton lichaze ingeniso yevenkile kunye nevenkile “njengokuchacha kakuhle nangona kuqhubeka ukuthotywa kweenyawo” kwaye wathi imida ye-ecommerce iyaxhamla ngokubuyela kumaxabiso apheleleyo.
UDunkerton uphinde wachaza ukuba kwikota yesine ukukhula kwengeniso kuqale kwakhona.
Wongeze ukuba inkampani iyakukhawulezisa ukusetwa ngokutsha kohlobo lwayo kwaye ngenxa yoko yomelezile iqela ngokumisela uShaun Wills njengeCFO, uSilvana Bonello njenge-COO kunye noPeter Sjӧlander njengoSihlalo.
Okubaluleke kakhulu, ukuya kuthi ga kwi-ajenda yozinzo, unike ingxelo, "silola ugxininiso lwethu kwiinkalo eziphambili zophawu lwethu kunye nemveliso, unxibelelwano lwethu nabathengi bethu, imisebenzi yethu kunye nokuzinza".
Egxininisa ukubaluleka komxholo wozinzo, uqhube wathi: “Sonke eSuperdry siqhutywa yinjongo yethu yokuba luhlu oluphambili lwefashoni oluzinzileyo. Kusekuninzi ekusafuneka kwenziwe kodwa ndichulumancile kuba siye sawongwa ngeenzame zethu” – ukubhekisa kula mawonga ebesiwakhankanye ngaphambili.
U-Dunkerton uphinde wathi inkampani izakwenza zonke iimpahla zayo zomqhaphu ezicocekileyo kwi-organic cotton ngo-2025, ngoncedo lwamafama angama-20,000 eIndiya. Yaba lelo nyathelo lithile layincedayo ukuba iphumelele elinye ibhaso, ngeli xesha i-CEO ngokwayo, eyaphumelela imbasa yoMmeli oGqwesileyo we-Organic enikwe yi-The Soil Association.
Abangaphakathi bathenga izabelo
Olona phawu luphambili lokusetwa ngokutsha kwebhrendi kukuvulwa kwevenkile yayo entsha yeflegi yehlabathi kwisitalato iOxford saseLondon ngokwindla. “Ngelixa okuninzi kuhleli kungaqinisekanga, ndijonge phambili ku-2022 nangaphaya ngokuzithemba ngokwenene njengoko sisenza ukusetha kwakhona,” utshilo uDunkerton.
Kuyakhuthaza kwakhona ukufumanisa ukuba abangaphakathi bathenga isitokhwe. I-Dunkerton ithenge izabelo ze-372,272 kumaxabiso avela kwi-260p ukuya kwi-270p, exabisa i-£ 990,077, kwi-19-20 Oktobha. I-Dunkerton ngoku ine-20.7% yesabelo kwishishini.
Omnye umlawuli, uShaun Packe, umlawuli wehlabathi jikelele kunye nokuzinza, uthenge izabelo ze-18,616 kwi-267p, exabisa i-£ 49,999, kwi-19 Oktobha.
Njengolunye lweempawu zefashoni ezizinzileyo zaseYurophu - ukusuka kwiimpahla ze-cotton ze-organic ukuya kubaqeqeshi be-vegan-i-Superdry ibekwe kakuhle njengempahla yokuguqula iklasi.
Abahlalutyi banenjongo yexabiso lokuvumelana kwi-stock ye-357p, emele i-upside ye-14.6% ukusuka kwixabiso layo langoku.
Ungathenga i-Superdry nge-0% ikhomishini kwiqonga lotyalo-mali lwehlabathi eToro.
tags abathengisi befashoni